Play FLV on Android - Bedelka iyo ciyaaro YouTube video on Android
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan iyo Play YouTube FLV on Android
YouTube, sida online video qaybsiga goobta ugu weyn, waxa uu noqday dooqa koowaad ee dadka si aad u hesho music, videos, bandhigyada TV oo dheeraad ah. Laakiin qaabka dhan videos halkan waa FLV, taas oo aan la ciyaaray karaa Android kiniiniyada telefoonka ama. Markaas sida aad wareejin karaan iyo ciyaaro YouTube FLV videos on phone Android ama kiniin ah? Haddii ay jirto aalad sida in loogu badalo karo iyo wareejiyo FLV in phone Android ama kiniin ah, waxa ay noqon doontaa mid fantastik ah! Waxaad tahay nasiib, halkan yimaado Wondershare MobileGo for Android , tababare xirfad Android, kaas oo kaa caawin kara si loogu badalo iyo FLV, WMA, AVI iyo dad badan oo qaabab video wareejiyo telefoonka Android ama kiniin . Aan leeyihiin isku day ah halkan.
Download Tababaraha this Android in aad PC.
Fiiro gaar ah: MobileGo for Android si buuxda u taageersan telefoonka ama miisaska badan Android. Halkan, waxaad eegi kartaa badan oo ay taageerayaan qalabka Android oo taageeray OS Android .
Sida loo ciyaaro FLV on Android
Marka hore, waxay kuu ogolaanaysaa 'eegto suuqa kala xiriir ka dib markii ay tababare tan Android aad kombuutarka.
Tallaabada 1. Isku phone / kiniin ah Android inay PC ka via cable USB ama Wi-Fi
Hadda, sidoo kale isticmaali cable USB ama Wi-Fi in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay PC. Tababaraha Tani Android lagu ogaan doonaa telefoonka Android ama kiniin ah isla markiiba. Markaas, aad telefoon Android ama kiniin muujinaysaa ilaa uu furmo suuqa laga bilaabo.
Tallaabada 2. Play YouTube telefoonka Android ama kiniin
Markaas dooran "Videos" galeeysid ka tagay si ay u muujiyaan suuqa kala video ah. Ka hor wareejinta iyo diinta FLV videos, waxaad dooran kartaa tayada video ah. Dhinaca geeska kore ee midigta, guji icon labaad. In menu jiido-hoos, doortaan "Meeshay"> "Video Conversion". xulo video tayada doonayo.
Markaas, furmo video ah, guji "Add" si ay u muujiyaan suuqa kala file browser. Dul folder meesha aad ku badbaadin FLV videos. Dooro videos aad rabto oo guji "Open" si ay u wareejiso.
Marka la wareejinayo FLV videos, waxaad heli kartaa warqad kuu sheegaysa filimada aad wareejinta ma taageersana by telefoonka Android ama kiniin. Marka ay tani dhacdo, waxaad u baahan tahay si ay u badalo aad telefoonka. Dooro "Haa" si loogu badalo videos FLV. Oo iyaga waxaa si toos ah dari doonaa telefoonka Android ama kiniin ah ka dib markii uu qaab beddelidda.
Waxaad ka arki kartaa habka ka mid ah diinta iyo kala iibsiga. Marka lagu sameeyey, waxaad eegi kartaa videos ee suuqa kala video ah. Oo waa inaad sidoo kale ka saari kara videos ka doorataa clips video oo guji "Delete" on menu ugu sareeya.
Halkan waxa aad ku raaxaysan kartaa videos on telefoonka aad Android hadda. Intaa waxaa dheer, Wondershare MobileGo for Android kaa caawin karaan si ay u gudbiyaan sawiro iyo badalo music in aad telefoon ama Android kiniin ah , iyo sidoo kale xiriir gurmad iyo SMS u dhexeeya aad telefoon iyo computer. o
Ma doonaysaa in ay si fiican loo fahmo tutorial ah? Just watch video ah.
Waxaa sidoo kale jira hab kale oo aad u ciyaaro YouTube videos on Android phone - Wondershare Player u Android . Sidaa daraadeed, ma aha in aad kala soo bixi app kasta oo kale si aad u daawato videos online YouTube. Si aad u badbaadin lahayd lacagtaada, aad xitaa khasnado karin videos iyo iyaga offline daawado. Ka sokow, waxa ay taageertaa qaabab video caan ah oo kala duwan oo ay ka mid yihiin FLV. Sidaas darteed haddii aad soo bixi kala duwan YouTube videos on telefoonka, rakibi kaliya ciyaaryahan taasi oo wuxuu ku raaxaysan horumarka muuqan loo maqli karo!
Dooro sida ugu fiican ee aad u gaar ah, oo wuxuu ku raaxaysan aad YouTube videos on telefoonka aad Android si fudud ku go hadda!